Welcome to Aayaha Nolosha » DAMACAAGU MEEL KUMA GEEYO!!!.
DAMACAAGU MEEL KUMA GEEYO!!!.
February 4, 2019 - Waxaa Qorey : Mohamed farah -
Qofka damaca badan waxaa la dhihi karaa waa daneyste mar walba ku xisaabtama in uu helo fursado uu dadka kale uga faa’iideysto.
Damaaciloowgu waa shaqsi khiyaamo badan oo isu arka in uu dadka ka Caqli badanyahay, wanaag walba oo loo sameeyana ma aha mid abaal ka haya waayo waxa uu aaminsanyahay in uu kaaga kasbadey Caqligiisa.
Dad badan waxa ay qabaan in damaca iyo faanku ayna kala harin oo haddii aad aragto qof damac badan faankuna uu ku lamaanyahay.
Qofka damaaciga ku sifoobey waa midka wax walba oo wanaag ah isaga isla raba oo dadka kale aan waxba u ogoleyn, waxa uu rabaa in uu noqdo qofka ugu sharafta badan, waxa uu doonayaa in uu ahaado ruuxa ugu hantida badan, waxa uu jacelyahay amaanta iyo in lagu sheego in uu yahay qofka ugu fiican Bulshada.
Waxa uu galaa meel walba oo uusan shaqo ku laheyn , waxa uuna rabaa mar walba in uu yahay qof hormuud u ah bulshada oo wax laga weydiiyo xataa haddii uusan laheyn kartideeda iyo aqoonteeda.
Damacloowga waxaa kale oo lagu yaqaanaa maseyr isaga oo kudayda horumarka dadka kale ay sameeyaan kaas oo haddii uusan awoodina been jila ama isu ekeysiiya.
Xasan Saalax waa aqoonyahan u kuurgala dhaqanka arimaha bulshada waxa uuna la saaxiibey nin lagu xanto in uu damac weynyahay oo lagu Magacaabo Axmed Dalabey kaas oo daraasad uu ku ogaanayo halka damaca uu qofku geeyo iyo sida uu u dhaqmo ka sameeyey, dad badan oo damaca ku caan baxay.
Xasan waxa uu u sheegay in uu Saaxiibkii Axmed Dalabeey mar walba uu been ka sheegi jirey noloshiisa uuna ku faani jirey wax uusan haysan, waxa uu intaa ku darey in saaxiibkii uu damiciisu aad u sareeyey wax walba oo wanaag ahna uu isagu isla rabey.
Xasan waxa uu carabaabey in damaciisu uu tusey Saaxiibkii in Ganacsato badan uu deyn ka qaato si uu ugu sameysto hanti adduunyo midaas oo marnaba uusan ka fikirin halka iyo habka lagu bixin karo.
Saaxiibkii markii uu Sanooyin ku jirey farxad iyo faan aan kala go, laheyn Baabuurka ugu danbeeyeyna uu ku Socdey ayey ku timid Muddadii deynta oo aan la heyn meel laga bixiyo, taasna waxa ay keentay in uula soo derso fikir, walbahaar iyo caloolyoow joogta ah, waxayna dhaxalsiisey in ay ku dhacaan cuduro kala duwan sida Sonkor, Dhiigkar iyo xanuuno kale oo badan.
Xasan Saalax waxa uu xusey in damac weynidu ay keento halis khatar gelisa jiritaanka qofka iyo Noloshiisa.
Carabtu waxa ay ku maahmaahdaa DAMAC KATIIR YAMUUTU FIL DARIIQ.
Waxaa hubanti ah in damacaagu uusan meel ku geyneynin in uu naftaada dhibaateeyo mooyee.
Sidaa darteed waxaa hagaagsan in aadan laheyn hami ka weyn waxa aad awoodo islamarkaana uuna damacaagu noqon wax qof kale haysto, ee aad ku keensato dadaal iyo karti aad ku wajahdo waayaha adag, naftaadana aad barto in ay ku qanacdo danta iyo xaalka aad ku sugantahay oo ay aaminto tabartaada iyo taagta aad leedahay, si uusan damaca weyn kuugu ridin ceel aadan ka soo bixi karin.